I-China Aluminium Countersunk Washer, i-Countersunk Fender Washer, i-Colour Wasrew Supporter
Ama-washer we-OEM wokuhlobisa we-Meta Alminum
Izinhlobo eziningi ezahlukahlukene ze-Hardware eyenziwe ngezifiso ze-CNC I-Aluminium wahser ngokuvamile ithathwa njengohlobo olulodwa lwezinto zokubopha ze-aluminium. Imvamisa isetshenziswa entweni yasekhaya neyehhovisi, okokuxhumana, ukuhlangana...
Ukupakisha: Isikhwama sePlastic Sealing, Carton / Njengoba udinga
Incazelo Yomkhiqizo Ama-Washers we-Countersunk ngokwezifiso ezinemibala Ama- washer we- Countersunk asebenza umsebenzi ofanayo ne-washer eyisicaba, kepha ahlinzeka ngendawo yokuthwala ngezikulufo zekhanda eliphansi. Ama-washers aqeda i-Countersunk...
Incazelo Yomkhiqizo Ama-Washers e-Colors Aluminium e-Colourful Colors Ama-washers e-Countersunk asebenza umsebenzi ofanayo nendwangu yokuwasha, kepha anika indawo ethokomele yesikhafu sekhanda. Ama-washer wokuqeda i-Countersunk anikezela indawo...
Umbala We-Anodizing Aluminium wokubala i-Washer M3 M4 M5 Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium washer ngokuvamile ibhekwa njengenye yezinhlobonhlobo ze- aluminium fasteners. Lapho i-gasket icindezelwa, kungcono ukusebenzisa i-torque wrench. Kwamabhande...
Umbala we-Anodized Billet aluminium Alloy Countersunk Washer Ama-washer we-Countersunk asebenza umsebenzi ofanayo njenge-washer eyisicaba, kodwa anikezela indawo ethwele izikulufa zekhanda eliyisicaba. Uhlobo lwe-water lwe-wahser: I-Washer...
Ukuthengiswa Okushisayo kwe-Anodized Aluminium Countersunk Washer Imfucumfucu eyenziwe nge-aluminium noma nge-aluminium alloy ifaka into elula kakhulu futhi ihlangabezana nokugqwala okuningi kune-washers yensimbi ekhanyayo. Ama-washer we-Countersunk...
I-Aluminium Washer Countersunk Flat Head Screw Bolt Washer Ama-washer we-Countersunk asebenza umsebenzi ofanayo njenge-washer eyisicaba, kodwa anikezela indawo ethwele izikulufa zekhanda eliyisicaba. Ama-washer wokuqedela i-Countersunk anikezela...
I-Aluminium Car Cup Head Alloy Washer I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) iyinhlangano yohlobo lwe-aluminium fasteners, Yenziwe nge-aluminium ephezulu kakhulu futhi inika amandla ukushesha okungcono ngenkathi isabalalisa umthwalo...
Isigaxa se-aluminium countersunk washer ye-cap head bolt I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) iyinhlangano yohlobo lwe-aluminium fasteners, Yenziwe nge-aluminium ephezulu kakhulu futhi inika amandla ukushesha okungcono ngenkathi...
Faka umbala we-anodized aluminium alloy taper washer I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) iyinhlangano yohlobo lwe-aluminium fasteners, Yenziwe nge-aluminium ephezulu kakhulu futhi inika amandla ukushesha okungcono ngenkathi isabalalisa...
I-Aluminium Button Head Washers ye-UAV I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) iyinhlangano yohlobo lwe-aluminium fasteners, Yenziwe nge-aluminium ephezulu kakhulu futhi inika amandla ukushesha okungcono ngenkathi isabalalisa umthwalo...
I-6061 ye-Aluminium Black anodised cup washers I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) iyinhlangano yohlobo lwe-aluminium fasteners, Yenziwe nge-aluminium ephezulu kakhulu futhi inika amandla ukushesha okungcono ngenkathi isabalalisa...
Ama-Washers Fender Washers anemibala emihle I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) iyinhlangano yohlobo lwe-aluminium fasteners, Yenziwe nge-aluminium ephezulu kakhulu futhi inika amandla ukushesha okungcono ngenkathi isabalalisa umthwalo...
Okwenziwe Ngokwezifiso Ukuqothula I-aluminium Ferster Fender Washer Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium washer ngokuvamile ibhekwa njengenye yezinhlobonhlobo ze- aluminium fasteners. Uma ukuvuza kwepayipi kufanele kufakwe esikhundleni ngemuva...
Iwusizo Kumshini We-Aluminium Countersunk Finishing Washers Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium washer ngokuvamile ibhekwa njengenye yezinhlobonhlobo ze- aluminium fasteners. Ngemikhumbi yokucindezela namapayipi anemidiya evuthayo neqhumayo,...
Ngokuqondile Nikeza i-CNC Conical Colors Anodized Aluminium Washer Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium washer ngokuvamile ibhekwa njengenye yezinhlobonhlobo ze- aluminium fasteners. Lapho ufaka i-gasket, qinisa amantongomane ngokulandelana. Noma...
I-OEM ne-ODM ephezulu ye-Aluminium Countersunk Cap Washer Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium washer ngokuvamile ibhekwa njengenye yezinhlobonhlobo ze- aluminium fasteners. Amandla wangaphambi kokuqinisa kwe-gasket akufanele yedlule ukubekiwe...
I-Precise Aluminium Countersunk Washer Machine Custom Conical Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium washer ngokuvamile ibhekwa njengenye yezinhlobonhlobo ze- aluminium fasteners. Ububanzi obungaphandle be-gasket yokubopha kufanele bube buncane...
Izinga eliphakeme eliphakeme lokuncintisana le-Aluminium Washer Countersunk Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium washer ngokuvamile ibhekwa njengenye yezinhlobonhlobo ze- aluminium fasteners. Ama-Rubber gaskets asetshenziswa futhi kuma-faucets...
Ngokuqondile Nikeza i-CNC Conical Colors Anodized Aluminium Washer Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium washer ngokuvamile ibhekwa njengenye yezinhlobonhlobo ze- aluminium fasteners. I-Wound gasket isho i-gasket elimelene ibe yindandatho ngebhande...